Akubona bonke abantu ukuya kudokotela ngendlela esifike ngesikhathi. Abanye abanayo kwakungenzeka lokhu, kuyilapho abanye abakhetha indlela ecacile kakhulu ukuqeda izifo - self, okusekelwe iseluleko abangane. Ngokwesibonelo, intsha, namahloni ukubona udokotela ivamise ukucelwa ukuthi kungani ukunwaya indawo obuseduze futhi yini okufanele uyenze kuleli cala. "Awu Ababukele" ukuncoma douching yokugcoba nemikhiqizo yazo zonke izinhlobo. Nokho, uma okungenani oyedwa wesifazane omdala uyoncoma uye kudokotela uyofuna icebiso. Kodwa uma futhi bengafundile ezindabeni kwenhlanzeko omlandelayo Girly okungenani oyedwa iseluleko "okuhle", ngeke nje uthole ukugula okungathí sina, kodwa futhi ukuba abe eyinyumba. Ngemva ukulunywa - kuphela izwi lesibonakaliso sokuqala izifo ezihlukahlukene.
izingxenye Kungani silume yangasese
Imbangela ukulunywa ezingemnandi bangaba:
• scuffed by izingubo ngokungalungile ifaniswe. Nokho, ngokuvamile Iningi zenzeka lapho egqoke wezinto zokwenziwa, makhulu kakhulu noma amancane panties ukotini bayakwazi ucindezela noma bagcobe isikhumba kubangele ukuluma. Ama-bacterium uvaleleke kule ndawo ongamsiza ukuba aluthole ukutheleleka.
• Ngezinye izikhathi ukulunywa endaweni abasondelene untidiness aphansi. Geza isibunu kudingeka okungenani kabili ngosuku, futhi ukwenza kanjalo ngokuhambisana nemithetho. Ukuba kude kwendawo, izithukuthuku - okuhle zizalela emhlabathini ngoba amagciwane.
• Esinye isizathu silume izitho zangasese? Ukulunywa kungaba uphawu komzimba. It kuvela ngenxa ukungondleki kahle noma okungenakho ukulinganisela, ngemvelo ezimbi, ukubhukuda amachibi angcolile noma ngenxa yokuphatheka nemithi ethile. Komzimba ingabagulisa Lubrication amakhondomu, ompompi, insipho kanye okhilimu, ezisetshenziswa for inhlanzeko yomuntu siqu.
• Umbuzo ezivamile mayelana nokuthi kungani ukunwaya indawo obuseduze, cela abantu njalo ukwenza depilation noma izinwele ukususwa bikini ndawo. Ngezinye izikhathi, ikakhulukazi uma usebenzisa insingo, waphucula izinwele nge ungqimba elincanyana kakhulu esikhumbeni. Uyaphila, kudala ukulunywa. Ngaphezu kwalokho, kabusha zikhule emuva izinwele njalo ukubangela isifiso nongalawuleki ekuqaleni.
• Ngaphandle kungenzeka izitho zangasese emibi ngenxa izintwala pubic. Kwaphela isikhathi eside, abantu babekholelwa ukuthi la izimuncagazi "Plant of isithukuthezi." Lokhu akunangqondo. Izintwala adluliswa ngokukhethekile ubuhlobo bobulili noma ukusetshenziswa nelineni enobuthi. Yelaphani emzini wabo kunzima kakhulu.
Konke lokhu izizathu akuzona kuphela wakwazi ukubangela ukulunywa ezinzima. Uma isikhumba abathintekayo uthola isifo, kufanele aphathe it eside kakhulu. Nokho, lokhu akulona embi kakhulu. Kungani itches ngaphakathi endaweni obuseduze? Ngoba umuntu egula noma ngocansi abanga izifo ezithathelwanayo. ukulunywa Olukhulu futhi a osenyameni ezimhlophe ihambisane thrush. Coleitis, vaginosis webhaktheriya, trichomoniasis, chlamydia, inqwaba izifo, futhi, uthome ukulunywa evamile. Futhi bagcina umlingani elinegciwane, nezifo eqinile ukuvuvukala futhi ngezinye izikhathi inkinga yokungabi nenzalo.
Okufanele ukwenze nge ukubukeka ukuluma
Uma uqala ukuzizwa ngingakhululekile, ungaceli abangane bakho nayejwayelene mayelana nalokho esiyokwenza. Okokuqala, inhlanzeko olunzulu, ukushintsha imikhiqizo yakho zangaphansi nenhlanzeko. Linda amahora ambalwa. Uma ukulunywa iqhubeka, futhi isifiso sokuthutha ekuqaleni suppresses zonke ezinye emizweni, ngokushesha ukuya kudokotela. Okuwukuphela kwendlela uyokwazi ukuvikela izimpilo zabo futhi alondoloze impilo ngokomzimba nangokwengqondo.
Ukukhuluphala Alimentary (ukukhuluphala ngokomthethosisekelo exogenous): Isizathu esiyinhloko